मनै रुवाउने तस्विर: परिवार पाल्न मलेशिया गएका शाहिको बाकसमा आयो श’व ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/मनै रुवाउने तस्विर: परिवार पाल्न मलेशिया गएका शाहिको बाकसमा आयो श’व !
Daddy को स्वास्थ मा सुधार आएको छ ! हामीलाइ देखे पछि हाम्रो मन राख्न अझै फुर्ती पनी बढाऊनु भो। यो video मा बुवा ले दिनु भएको message ले अबश्य पनि कोरोना संग लडी रहनु भएको सबैमा केहि न केहि सकारात्मक भावना अनि हौसला बढाऊन मद्दत गर्ने छ होला भन्ने आशा राखेका छौं !
*** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***